Mogok Media: 2008
မိတ်ဆွေများအားလုံး ၂၀၀၉ နှစ်သစ်တွင် အကြပ်အတည်းများ၊ အဆင်မပြေမှုများမှ လွတ်မြောက်ကြပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ...။
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 6:22 PM0comments
မိုးကုတ်မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆောင်းရာသီရောက်ရင် ကျန်းမာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတာကို အပန်းဖြေတဲ့သဘောဖြစ်ဖြစ် တောင်တက်ကြလေ့ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီဇင်ဘာလဆို တောင်တက်ရာသီလို့ ပြောရမလားမသိဘူး။ အစုလိုက် အဖွဲ့လိုက် ယောင်္ကျား၊ မိန်းမ၊ ကလေး၊ လူကြီး အစုံ တောင်တက်ကြတယ်။ အမြဲတမ်း တက်နေကြတောင်တွေကတော့ မိုးကုတ်-မိုးမိတ် နယ်စပ် လွယ်ဆာရွာ အနီးမှာရှိတဲ့ အံ့ဘွယ်တောင် (လွယ်ဆာတောင်)၊ ပြောင်ခေါင်းရွာ အနီးမှာရှိတဲ့ တောင်မင်းတောင် ( တောင်မဲတောင်လို့လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဖွဲလည်း ဒီနှစ်တော့ တောင်မဲတောင်တက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ အမြင့်ပေကတော့ ၇၅၄၄-ပေ ရှိတယ်။ နေ့ကတော့ ဒီဇင်ဘာ (၂၅)ရက်နေ့၊ ခရစ္စမတ် နေ့လေ။ အမှတ်တရ ခရီးစဉ်လေးပဲပေါ့ ......။
တောင်ထိပ် စောစောရောက်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနိုင်အောင် မနက်ပိုင်း ၃-နာရီခွဲလောက်က စတက်မယ်ဆိုပြီး ဈေးသစ်ရပ်၊ ဖောင်တော်ဦးဘုရားအောက်နားက ကိုအောင်မင်းသန့် အိမ်မှာလူစုကြပါတယ်။ တက်မယ့်လူက စုစုပေါင်း (၂၂)ယောက်တောင်ရှိတယ်။ ၄နာရီခွဲလောက် လူတွေစုံတော့ စံပြ မုန့်တိုက် (SP) က ကိုတေ့တေ က သူ့ ဟိုင်းလတ်စ်ကားနဲ့ တောင်ခြေနားက (တောင်ခြေဆိုပေမယ့် နှစ်တောင်၊ သုံးတောင်လောက် ထပ်ကျော်ဖြတ်ရသေးတယ်) ၊ ပုဂ္ဂလိက သစ်တောစိုက်ခင်းတစ်ခုနားထိ သွားပြီး အဲဒီကနေမှ တောင်တက်ခရီးစဉ် စတင်ကြပါတယ်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၅နာရီ ဆယ်မိနစ်။
မနက်စောစော၊ နေမထွက်သေးတော့ လမ်းတွေက မဲမှောင်ပြီး ဘာမှ မမြင်ရသေးဘူး။ ဆိုင်မှာ ကျနော် စက်နှိုက်ရင် သုံးဖို့ဆို ၀ယ်ထားတဲ့ မိုင်းနင်းတွေမှာသုံးတဲ့ ခေါင်းစွပ်တဲ့ ဓာတ်မီးလေးယူလာလို့ တော်သေးတယ်။ တအားဟန်ကျလို. အားလုံး ကျေးဇူးတင်နေကြတယ်။ ဒီကြားထဲ ရှေ့က တစ်ယောက်က ဖြတ်လမ်းထင်ပြီး လမ်းမှားပြီး ခေါ်သွားတယ်။ မဲမဲမှောင်မှောင်နဲ့ မပြုတ်ကျအောင် အပင်တွေ ခြုံတွေကို ကုတ်ကပ်ဆွဲ၊ ခြေလှမ်းတွေ သတိထားပြီး ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် တက်လိုက်ရတယ်။ တစ်ဖွဲ့လုံး ဟူးဟူး ဟဲဟဲနဲ့။ လမ်းညွှန်တဲ့တစ်ယောက်ကိုလည်း ၀ိုင်းပြီး ထောပနာပြုကြတယ်။ လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ရောက်တော့ ရောင်နီလေးက ပျို့နေပြီ။ လှလိုက်တဲ့ ရှုခင်းလေးတွေ။ မြို့ထဲကို လှမ်းကြည့်တော့ ဘာမှ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရသေးဘူး။ မြင်ကွင်းရှင်းအောင် ခြုံတွေကိုဖြဲရှင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။
သွားရင်း တက်ရင်းနဲ့ နေထွက်လာလည်း တိမ်တွေရှိနေသေးတော့ သိပ်မလင်းသေးဘူး။ လမ်းတလျှောက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စလိုက်-နောက်လိုက်၊ စောင့်လိုက်-နားလိုက်နဲ့ တက်ခဲ့ကြတာ ဗိုက်ဆာလာတော့ ကိုတေ့တေ ဝေပေးထားတဲ့ စံပြ ပူတင်းပေါင်မုန့်တွေကို မနက်စာအဖြစ် စားကြတယ်။ ရေသောက်ရတာလဲ သောက်ဖူးသမျှတွေထဲမှာ အချိုဆုံးပဲထင်တယ်။
တောင်မဲတောင်ခြေကိုရောက်တော့ ခုနှစ်နာရီကျော်ပြီ။ အားလုံးလဲ တော်တော်လေး ပြိုင်းနေကြတယ်။ ကိုအောင်မျိုးသန့်တစ်ယောက်ကတော့ တော်ပြီ.. နောက်နှစ်ကျရင် မတက်တော့ဘူး ဆိုပြီးနောင်တသံနဲ. ငြီးတွားနေလေတယ်။ ခဏနားပြီးတော့ စတက်ကြတယ်။ တက်ရတာ တော်တော်လေးမတ်တယ်ဗျာ။ တချို့ဆို ဒူးတုန်နေကြတယ်။ အောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တစ်မြို့လုံးကို အပေါ်စီးကနေမြင်နေရတယ်။
လေကလဲ တဟူးဟူးနဲ့။ ရှူရတာလဲ မြို့ထဲကနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး၊ ကောင်းလိုက်တာ။ တိမ်တွေကလည်း ဘေးမှာကော၊ အောက်မှာကော၊ အပေါ်မှာကောပဲ။ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း အပေါ် တောင်ပေါ်ကိုရိုက်လိုက်၊ အောက်ရှုခင်းတွေကို ရိုက်လိုက်၊ ဘေးဘက်ကိုရိုက်လိုက်နဲ့ ၃၆၀ဒီဂရီပဲရှိလို့ တော်သေးတာပေါ့။ ဒီကြားထဲ မင်းသားတွေကလဲ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ပို့စ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရိုက်ခိုင်းနေသေးတယ်။ ပုံတွေ လိုက်ရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိုလွင်မိုးကြီးကိုလည်း သတိရသွားမိတယ်။ သူ့ကိုလည်း ဒီမြင်ကွင်းတွေ ရိုက်စေချင်လိုက်တာ၊ ကင်မရာအကောင်းစားကြီးနဲ့။ သူ မိုးကုတ်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး။
ကျနော်လည်း ရောက်တုန်း ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေရအောင် ရိုက်ထားမှဆို ရိုက်ရင်း-တက်ရင်းနဲ့ တက်တဲ့လူတွေနောက် တော်တော်လေးကျန်ခဲ့တယ်။ မှီအောင် ခပ်သွက်သွက်လေး တက်ရင်း ခြေထောက် ကြွက်တက်မလိုတောင် တစ်ခါဖြစ်သေးတယ်။ ရောက်ပါပြီ တောင်ထိပ်ကို။ စောင့်နေကြတယ်။ ဒီတောင်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ နောက်ဟိုတစ်တောင်မှရောက်မှာတဲ့ အမောပြေအောင် ဆီးပြောကြတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း တောင်မြင့်မြင့်ဆို စေတီတစ်ဆူဆူတော့ အမြဲတည်ထားတတ်တယ်။ စေတီမြင်တော့ ရောက်ပြီထင်တာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဆက်ချီတက်ကြတယ်။
အဲဒီတောင်ကနေ ပြေပြေလေးဆင်းသွားတော့ တောင်မဲတောင်ထွတ်ကြီးကို ထီးထီး မြင်နေရပြီ။ ကျောက်သားအတိကြီးပဲ။ တောင်နှစ်တောင်ကြားထဲကနေ နှစ်ဖက်စလုံး လှည့်ပတ် ကြည့်မိတယ်။ ၀ူခုန်းကားတွေထဲကအတိုင်းပဲဗျာ။ ကျောက်တောင်တွေကော၊ အပင်တွေကော၊ တိမ်တွေကော။ လူတောင် ၀ူခုန်းလို ဆီးဖော် ဆီးဖော်ဆို အော်အော်ပြီး ခုန်လိုက်ချင်တယ်။ အဲဒီတောင်ပေါ်ရောက်မှပဲ လူဟာမျောက်နဲ. အမျိုးတော်တယ်ဆိုတာ လုံးဝယုံလိုက်ပြီ။
အမောတော့ တော်တော်လေးပြေသွားပြီ။ ကျနော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း လူတွေကိုရော၊ ရှုခင်းတွေကိုရော တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံ လိုက်ရိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ကင်မရာလေးတစ်လုံးလောက် ရချင်နေမိတယ်။ ဟိုးဘက်တောင်ပေါ်တက်နေကြတဲ့ လူလေးတွေကိုလည်း ရေးရေးလေး မြင်နေရတယ်။ ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးနဲ့ ကျောက်တောင်ထီးထီးကြီးကလည်း ဟာမိုနီ ကိုက်နေလိုက်တာ။ စိတ်တိုင်းကျ ရိုက်ပြီးတာနဲ့ တောင်ထိပ် ဆက်တက်တယ်။ တက်ရတာ အသဲယားစရာကောင်းတယ်။ ကျောက်တောင်ထီးထီးကြီးမှာ အပင်ကြီးတွေ မရှိပဲ မြက်ခြောက်တွေလောက်ပဲ ရှိတယ်။ သတိထားပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း တက်သွားတယ်။ ရောက်ပါပြီ... တောင်ပေါ်ကို...။ မနက် ရှစ်နာရီခွဲကျော်ကျော်လောက်ပါ။
တောင်ပေါ်မှာ ကျနော်တို့ထက်အရင် ရောက်နေကြတဲ့ အဖွဲ့လည်း ရှိတယ်ဗျ။ ဆယ်ယောက်ကျော်လောက်ရှိမယ်။ ကျနော်တို့လည်း ညာဘက် တောင်ထွတ်နေရာဦးပြီး စတည်းချကြတယ်။
အားလုံးလည်းပင်ပန်းပြီး ဗိုက်ဆာနေကြတယ်။ တောင်စတက်တုန်းက ဝေထားတဲ့ ထမင်းကြော်ထုတ်တွေ ဖြည်ပြီး အာဟာရ ဖြည့်တင်းကြတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အမြဲအကွက်စိတဲ့ ကိုအောင်မျိုးသန့်က သူယူခဲ့တဲ့ ဘီတာဒိုင်းလိမ်းဆေးတွေ၊ ဟန်ဆာပလတ်စ်တွေ၊ လန်းဆန်းတွေ၊ တစ်ခြားလိမ်းစရာဆေးတွေကိုကြည့်ပြီး ဘယ်သူမှလည်း ဘာမှ မဖြစ်ကြဘူး... ငါ့ဟာတွေတော့ အလကားဖြစ်ကုန်ပါပြီ ဆို ပြောလို့ အားလုံး ၀ိုင်းအော်ကြသေးတယ်။ ကိုတေ့တေကတော့ သူ့ဆိုင်ကယူခဲ့တဲ့ ပါဖက်လိမ္မော်ထုပ်တွေ၊ ဝေဖာထုပ်တွေ အချိုပွဲအဖြစ် ဝေတယ်။ အားလုံး စားပြီး သောက်ပြီးကြတော့ တစ်ရေးတမော အိပ်တဲ့လူက အိပ်၊ တောင်ပေါ် ဟိုကြည့် သည်ကြည့် ကြည့်တဲ့လူကကြည့်၊ ဆော့နေကြတဲ့ လူတွေက ဆော့၊ မျောက်လို ကမြင်းတဲ့သူက ကမြင်းနေကြနဲ့...။
ကျနော်ကတော့ ပုံတွေပဲ ထပ်လိုက်ရိုက်နေတယ်။ နောက်ထပ် တောင်တက်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်း တဖွဲဖွဲနဲ့ ထပ်ရောက်လာကြတယ်။ စုစုပေါင်း သုံးဖွဲ့။
တောင်ထိပ်စေတီဘေးမှာ အရင် မိုးကြိုးပစ်ပြီး ပြိုကျနေတဲ့ စေတီဟောင်း တစ်ပိုင်းလည်း တွေ့ရတယ်။ စေတီအုတ်ခုံမှာ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ရေးထားခြစ်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေ၊ နေ့စွဲတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ ဘုန်းကြီးသီတင်းသုံးတဲ့ ကျောင်းတွေ ဘာတွေတော့မရှိဘူး။
တောင်ပေါ်ကနေ အောက်ခြေက ပြောင်ခေါင်းရွာ၊ မိုးကုတ် အရှေ့ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်း၊ စီဒီအမ်အေ တာဝါတိုင်ကြီး၊ မိုးမိတ်မြို့ဘက် အကုန်မြင်ရတယ်။ ခါတိုင်း ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို မြင်ရတယ်လို့တော့ ပြောကြတယ်။ ခုတော့ မြူတွေ၊ တိမ်တွေ ဆိုင်းနေတော့ ခပ်ဝေးဝေးအဲသည်ထိ မမြင်ရဘူး။ မှန်ဘီလူးလဲ ဘယ်သူမှ မပါလာကြဘူး။
တောင်ပေါ်မှာ ရာသီဥတု သုံးမျိုးပြောင်းတယ် ဆိုတာ မှန်သားပဲ။ ခဏနေတုန်း တိမ်တွေ မည်းတက်လာတယ်။ ရာသီဥတု ချက်ခြင်း ပြောင်းသွားတယ်။ နေမပွင့်တော့ လေတိုက်တာနဲ့ တော်တော်အေးတယ်ဗျ။ ဒါနဲ့ စတည်းချတဲ့နေရာ ပြန်လာတယ်။ အမယ် အေးလို့ဆို မိုးကုတ်ကနေ မန်းလေးကို ဆောင်းခိုသွားကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိသဗျ။ ကျနော်အင်္ကျီထူထပ်၊ ဦးထုပ်ဆောင်း၊ နေရာလွတ် တနေရာရှာပြီး ခဏ လှဲနားတယ်။ ပြီးတော့ ဟိုဘက်တောင်စွန်းထိပ် ပြန်သွားရိုက်တယ်။
ဟိုဘက်က ကောင်တွေကတော့ သတိထားဦးနဲ့ စိုးရိမ်တကြီး အော်ဖော်ရကြတယ်။ အဲသည်ဘက်မှာ နာရီဝက်ကျော်ကျော်လောက် အချိန်ဖြုန်းပြီးမှ ပြန်လာခဲ့တယ်။ ဟိုပြောသည်ပြော ဟိုစားသည်စား ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ၁၂နာရီလောက်ကျတော့ တောင်အောက်ပြန်ဆင်းမယ်ဆိုပြီး လူစုကြတယ်။ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေလည်း ထပ်ရိုက်ကြတာပေါ့။
ပြီးမှ အားလုံး အနောက်ဖက်လမ်းကနေ ပတ်ပြီး ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတယ်။ အလာလမ်းနဲ့ မတူပဲ အဲဒီလမ်းလည်း ဆင်းရ တော်တော်လေးခက်တယ်။ လျှိုတွေထဲ ပတ်ဆင်းရတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒူးကောင်းမကောင်း စကားပြောတယ် ဆို စ-နေကြသေးတယ်။ လမ်းမှာ ထင်းခုတ်တဲ့ လူတွေကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ မေးကြည့်တော့ ဒီဇင်ဘာ တစ်လလုံး နေ့တိုင်း တောတက်ကြတယ်တဲ့။ ဂေါ်ရခါး အမျိုးသမီးကြီးတွေကော ကလေးတွေကော။ (ကင်မရာတော့ ဓာတ်ခဲကုန်သွားလို့ မရိုက်နိုင်တော့ဘူး) ထင်းထမ်းတဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းမတက်နိုင်၊ ပညာမသင်ကြားနိုင်ကြတာကိုတော့ သနားမိတယ်။ ငါလည်း အဲဒီလိုမျိုး မိဘက မွေးခဲ့ရင် ထမ်းနေရမှာပဲဆို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်ဗျာ။ ကိုအောင်မျိုးသန့်ကတော့ သူတို့ကို မသုံးလိုက်ရတဲ့ ဆေးဝါးတွေ ဒါနပြုသလိုလိုနဲ့ ကြေငြာနေပြန်တယ်။ ညနေ သုံးနာရီမထိုးခင် မူလ ကားရပ်ထားတဲ့နေရာ အားလုံး ပြန်ရောက်ကြတယ်။ အပြန် ကားလမ်းခရီးမှာ အရင်ဆင်းသွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့က သူတွေနဲ့ သွားပြန်တွေ့တော့ အပြန်အလှန် စကြ၊ နောက်ကြ၊ တ၀ါးဝါးနဲ့ ပျော်စရာကြီး။
မြို့ထဲရောက်တော့ ဒကာတော် ကိုတေ့တေက အစားအသောက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေကံ့ကော် စားသောက်ဆိုင်ကို ခေါ်သွားပြီး ကျွေးမွေးပြုစုပြန်ပါသေးတယ်။ အဲဒီကနေ စားသောက်ပြီးမှ အားလုံး ကိုအောင်မျိုးသန့် အိမ်မှာဆင်းပြီး နှုတ်ဆက်ကာ လူစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်နှစ်ဆို မတက်တော့ဘူး လို့ တောင်တက်တုန်းက ပြောခဲ့တဲ့ ကိုအောင်မျိုးသန့်ကတော့ နောက်နှစ်လည်း တက်ဦးမယ်... တဲ့။
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 3:49 PM3comments
ဦးကိတ္ထိသာရ တဖြစ်လဲ ဦးဇင်း ဦးကျော်ဟိန်း မိုးကုတ်ကို ကြွလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိုးကုတ် အနောက်ပိုင်း ကျပ်ပြင်၊ ပါရမီ နာမှုကူညီရေးအသင်း က ကမကထပြု ခေါ်ယူတာဖြစ်ပြီး ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ တရားအလှူပွဲ အသျှင် ကိတ္ထိသာရ (အကယ်ဒမီ ဦးကျော်ဟိန်း) စိတ်အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ လို့ နာမည်တပ်ထားပါတယ်။
နေ့ရက် - ၁၃၇၀-ပြည့်နှစ် နတ်တော်လဆုပ် (၁၃)ရက်မှ ပြာသိုလဆန်း (၄)ရက်နေ့အထိ။
(၂၅.၁၂.၂၀၀၈ မှ ၃၀.၁၂.၂၀၀၈)
နေရာ - မိုးကုတ်မြို့ အနောက်ပိုင်း၊ ပန်းမလယ်ပြင်ကျောင်းတိုက်။
အချိန် - ညနေ (၆း၃၀)
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 1:31 PM0comments
၂၀၀၈-ခုနှစ်မကုန်ဆုံးမှီ ဒီဇင်ဘာ (၂၁)ရက်နေ့တွင် မိုးကုတ်မြို့ဝန်းကျင်ကို ဗဟိုပြု၍ အင်အားအသင့်အတင့်ပြင်းထန်သော မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ငလျင်၏ အင်အားမှာ ၅.၂ ရစ်ချက်တာစကေးရှိပြီး ကမ္ဘာအေးမြေငလျင်တိုင်းတာရေးစခန်း၏ အရှေ့မြောက်ဖက် မိုင်(၃၈၀)ခန့် အကွာအဝေးကို ဗဟိုပြု၍ နံနက်(၅)နာရီ (၅၇)မိနစ် (၂၂)စက္ကန့် အချိန်တွင် လှုပ်ခတ်သွားကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ည (၉)နာရီ (၅၄)မိနစ် အချိန်တွင်လည်း ငလျင်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ၍ လှုပ်ခတ်သွားပါသည်။ အဆိုပါငလျင်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းဒေသ တချို့တွင်လည်း သိရှိခံစားလိုက်ရသည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုပါသည်။ ယခု ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် အပျက်အစီး အထိအခိုက် မရှိခဲ့ပါ။ ပြီးခဲ့သော ၂၀၀၄-ခုနှစ်တုန်းကလည်း ယခုကဲ့သို့သော နှစ်ဟောင်းမကုန်ဆုံးမှီ ဒီဇင်ဘာလ (၂၅)ရက် ခရစ္စမတ်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်တွင် အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၌ အင်အားပြင်းထန်သော ဆူနာမီငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး လူအသေအပျောက်များစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။
ရှေးက မိုးကုတ်မြို့တွင် လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သော ထင်ရှားသည့် ငလျင်များကို သမိုင်းစာအုပ်များတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဗြိတိသျှခေတ် ၁၉၁၂-ခု မေလ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်ကြမ်းဒေသတ၀ိုက်ကို ဗဟိုပြု၍ လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သော ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် မိုးကုတ်မြို့တွင် သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးဖြစ်သည့် သမိုင်းဝင် ရွှေဂူကြီးစေတီတော် ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးခေတ် ၁၉၄၆-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၂)ရက် ကြာသပတေးနေ့ ည (၉)နာရီ (၄၃)မိနစ် အချိန်တွင် လှုပ်ခတ်သွားခဲ့သော ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် မင်းဘုရားတောင်ပေါ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည့် ချမ်းသာကြီးစေတီတော်မှာ ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ ချမ်းသာကြီးစေတီတော်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက် ၁၉၄၇-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့ ည(၉)နာရီ (၃၀)မိနစ်အချိန်တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော မြေငလျင်ဒဏ်ကြောင့် စေတီတော်မှာ ထပ်မံ၍ မြေခခဲ့ရပြန်ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်ကြမ်းဒေသတ၀ိုက်သည် ပြင်းထန်သော ငလျင်များ လှုပ်ရှားလေ့ရှိသည့် ငလျင်ရပ်ဝန်းဒေသဖြစ်သည်။ ထိုငလျင်ကြောတွင် မိုးကုတ်မြို့သည်လည်း ပါဝင်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ကျောက်ကြမ်းပြတ်ရွေ.ကြောသည် ရှမ်းပြည်နယ် နောင်ချြိုမို.အနီးမှ တောင်မြောက်အနေအထား ဖြတ်သွားလျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်။
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 1:13 PM0comments
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 1:18 PM0comments
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 6:41 PM 1 comments
မိုးကုတ်မြို့သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်သောမြို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ တိုင်းရင်းသားတို့၏ အဖိုးတန်အမွေအနှစ်ဖြစ်သော စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ ဂီတအနုပညာ စသည့် ကွဲပြားသော ၀ိသေသလက္ခဏာများကိုလည်း မပျောက်ပျက် မတိမ်ကောစေရန်၊ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းသွားကြရမည်ဖြစ်သည်။ မိုးကုတ်မြို့နယ် ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသင်း သည်လည်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ၏ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် အစဉ် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
အသင်းအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒနှင့်အညီ စာမတတ်သူပပျောက်ရေး စီမံချက်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် ကာလများတွင် မြို့နယ်အဆင့် ရှမ်းစာပေ၊ မ ငါးလုံး သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အခါအားလျော်စွာ ဆရာဖြစ်မွမ်းမံ သင်တန်း များကိုလည်း ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီ (တက္ကသိုလ်များ-မြန်မာနိုင်ငံ) ၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အသင်းအနေဖြင့် မိုးကုတ်နှင့် မိုင်းလုံ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ဆရာများ စေလွှတ်ကာ ရှမ်းစာပေသင်တန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက် ရှိသည်။ ထို့အပြင် ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်၍ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ကိစ္စရပ်များကိုလည်း အခြားမြို့နယ်များနှင့် လက်တွဲကာကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
အသင်းအနေဖြင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို မပျောက်ပျက်စေရန် ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းလျှက်ရှိရာ နှစ်စဉ် နတ်တော်လဆန်း (၁)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မြဲဖြစ်သော နှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်အသီးသီးသို့ အိုးစည်ဗုံမောင်း ယဉ်ကျေးမှုအကများဖြင့် မီးဆုခံရောက်ရှိမြဲဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်ကူး မီးဆုခံထွက်ခြင်းသည် အလှူငွေရရှိရေးကို အဓိကထားခြင်းမဟုတ်ပဲ အိမ်ရှင်ကို ဂါရ၀ပြုကန်တော့ခြင်း၊ နှစ်သစ်တွင် ဆုမွန်ကောင်းများ လာရောက်တောင်းပေးခြင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းသဘောကို ဆောင်ခြင်း ဟူသော အနက်ကိုဆောင်သည့် ရှေးရိုးရာ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိလာသော အလှူငွေများကို အသင်းတိုက်ဖြစ်မြောက်ရေး၊ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ပိတ်စွယ်၊ သဲဖြူဝိုင်းရပ်ကွက်အတွင်းတွင် တစ်ဧကနီးပါးရှိသော အသင်းပိုင်မြေကွက်ကို ၀ယ်ယူထားပြီး အနှစ်(၃၀) မြေဂရံကိုလည်း ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ အသင်းအနေဖြင့် အဆောက်အဦးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
မိုးကုတ်မြို့နယ် ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့သည် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ၁၉၇၂-ခုနှစ်မှစ၍ ယခုလက်ရှိ အချိန်ကာလအထိ အမှုဆောင်ကော်မတီများဖြင့် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အသင်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို လာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ မိုးကုတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း အသင်း၏ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အပြုသဘော ဝေဖန်ခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းများကို ကြိုဆိုလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြို့သူမြို့သားများအနေဖြင့် အဖက်ဖက်မှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပံ့ပိုးပေးစေလိုကြောင်းကိုလည်း မိုးကုတ်မီဒီယာသို့ သတင်းပါးရင်း ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။
Source: TLCC (MGK)
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 6:37 PM0comments
မိုးကုတ်မြို့ ကျပ်ပြင်မြို့မရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသော သဟာယစာကြည့်တိုက် ၏ သဟာယစာပေဆု ကို ၂၀၀၇-ခုနှစ်တွင် စတင်၍ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ရာ ၂၀၀၉-ခုနှစ်တွင် တတိယအကြိမ်မြောက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၇-ခု ပထမအကြိမ် သဟာယစာပေဆုကို စာရေးဆရာ ညီပုလေး၏ ငြိမ်သက်တစ်မိနစ်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ စာအုပ်အားလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈-ခု ဒုတိယအကြိမ် သဟာယစာပေဆုကို The Waves မဂ္ဂဇင်းအား လည်းကောင်း ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့က ရွေးချယ်ပြီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ လာမည့် ၂၀၀၉-ခုနှစ် တတိယအကြိမ်မြောက် သဟာယစာပေဆု ကိုတော့ အတွေးအမြင်စာစောင်၏ အယ်ဒီတာအဖွဲ့အား ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။ သဟာယစာပေဆုကို နှစ်စဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်သော ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့တွင် အစဉ်အလာအတိုင်း ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အတွေးအမြင် စာစဉ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ခုတည်းသော လစဉ်ထုတ် အတွေးအခေါ်စာစောင် ဖြစ်သည်။ အတွေးအမြင်စာစောင် အမှတ်(၁)ကို ၁၉၈၄-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ အတွေးအမြင်ကို စတင် မွေးဖွားသန့်စင်ခဲ့ကြသူများမှာ မောင်ဝံသ နှင့် မောင်ကောင်းမြင့် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထို့နောက် အယ်ဒီတာအဖွဲ့တွင် ကြည်သာဦး (မောင်မြင့်ဦး-ညောင်လေးပင်) ပါဝင်လာကာ အတွေးအမြင်ကို ဆက်လက်ထိန်းကျောင်းခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သီရိဝံသ၊ ကျော်ကြီး၊ ရဲမြင့်၊ ဇော်ဝင်းတို့က တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပဲ့ကိုင်လာခဲ့ကြရာ ယခုလက်ရှိ အတွေးအမြင် အုပ်နှစ်ရာမြောက်တွင် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်များမှာ ဦးသိန်းဝင်း၊ သီရိဝံသ၊ လွတ်လပ်စိုး၊ ဦးရဲမြင့်၊ နောင်နောင်စိုး ဟူ၍ စည်စည်ကားကား ပါရှိသည်။
အတွေးအမြင်စာအုပ် စတင် ထုတ်ဝေစဉ်ကတည်းက စီစဉ်သူများ၏ ဦးတည်ချက်တွင် မိမိဦးနှောက်ကို အသုံးချ၍ ဆင်ခြင်တုံတရား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုသူများအတွက် ဟူ၍ ပါရှိခဲ့ပါသည်။ အတွေးအမြင်စာစောင်သည် ကနဦးကတည်းကပင် အရုပ်မပါ၊ ပန်းချီ ဓာတ်ပုံတွေမပါ၊ ၀တ္ထုမပါ၊ ကဗျာမပါပဲ အခြားသော ရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းများ စာစောင်များကြားဝယ် နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ပြီး သီးသန့်စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် သီးသန့်စာစောင်အဖြစ် ရှင်သန်ခဲ့ပါသည်။
အတွေးအမြင်သည် တာထွက်ကောင်းခဲ့ပါသည်။ သီးသန့်စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး၏ တစိုက်မတ်မတ် အားပေးမှုကြောင့် အရှိန်ကောင်းလာခဲ့သည်။ အတွေးအမြင် အမှတ်(၂)ကို ပုံနှိပ်နေချိန်တွင် အမှတ်(၁)မှာ လက်ကျန်မရှိအောင် ကုန်သွားခဲ့ရသည်။ နယ်များမှ အမှာစာများ ထပ်မံရောက်ရှိလာ၍ အမှတ်(၁၃) ပုံနှိပ်ပြီးသည့်နောက် အမှတ်(၁)နှင့်(၂)ကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ၍ပုံနှိပ်ခဲ့ရပါသည်။ လုံးချင်းစာအုပ်မဟုတ်သော စာစောင်တစ်ခုကို ဒုတိယအကြိမ်ပုံနှိပ်ရခြင်းမှာ ထိုခေတ် စာနယ်ဇင်းလောက၀ယ် မရှိသလောက်ရှားသည့် ထူးခြားသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပင်။ အတွေးအမြင်စာစောင် အမှတ်(၁) ထွက်ရှိပြီးနောက် တုံ့ပြန်ရိုက်ခတ်လာသော ဂယက်များကိုလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။
ထိပ်တန်းစာရေးဆရာကြီးများနှင့် ပညာရှင်ကြီးများ၏ ဆောင်းပါးများချည်းသာ သီးသီးသန့်သန့် ဖော်ပြထားခြင်း၊ ဆောင်းပါးများမှာလည်း ပညာတတ်အ၀န်းအ၀ိုင်းကသာ စိတ်ဝင်စားမည့် လေးလေးပင်ပင် အရေးအသားများက အများစုဖြစ်နေခြင်း၊ အရောင်အသွေး အဆင်တန်ဆာ လုံးဝမပါပဲ ဆောင်းပါးခေါင်းစီးများကိုပင် ခဲစာလုံးပွိုင့်များ ကစား၍ ဖော်ပြထားခြင်း၊ စာအုပ်အရွယ်မှာ ပုံမှန်မဂ္ဂဇင်းအရွယ်မဟုတ်ပဲ ၁၀ချိုးဆိုဒ်ဖြစ်ပြီး Reader's Digest ပုံစံအတိုင်း မျက်နှာဖုံးတွင် မာတိကာတင်ထားခြင်း၊ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဘရင်ကလေး ၏ နွဲ့ပျောင်းသော အတွေးအမြင် စာလုံးဒီဇိုင်းကအစ ဆန်းသစ်နေခြင်း စသည့် ထူးခြားချက်များကြောင့် အတွေးအမြင်ဟူသော စာစောင်သစ်ကလေးကို ဆရာမောင်စွမ်းရည် စသည့် စာပေဝေဖန်ရေးဆရာများကပင် ချီးကျူးကြိုဆိုကာ ရေးသားကြလေသည်။
ဆရာကြီးတက်တိုး ကလည်း ယခုလို အတွေးအမြင်စာစောင်မျိုး စောင်ရေ ငါးထောင်ကျော် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီနိုင်ပြီဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်ကြီး ပြောင်းလဲတော့မည်ဟု ပြောဝံ့သည် ဟူ၍ စာအုပ်ထွက်ရှိပြီး ငါးအုပ်မြောက်အချိန်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အတွေးအမြင်တွင် ဆောင်းပါးချည်းသက်သက်သာ ဖော်ပြခဲ့ရာ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် တခုပ်တရ သိမ်းဆည်းထားရမည့် အဖိုးတန်ဆောင်းပါးများ မြောက်မြားစွာ ပါရှိခဲ့သည်။ အတွေးအမြင်၏ ရှေ့ပိုင်း စာစောင်များတွင် တစ်လလျှင် ဆောင်းပါးပုဒ်ရေ (၃၀)ခန့် ပါရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လစဉ်ဆောင်းပါးပုဒ်ရေ (၄၀)ခန့် ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ယခုအုပ်ရေ (၂၀၀)မြောက်ပြည့်သည်အထိ ၂၄-နှစ်တာကာလအတောအတွင်း အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးပေါင်း ၆၀၀၀မှ ၈၀၀၀ကြား ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အတွေးအမြင်စာစောင်သည် မူလက ခဲစာလုံး မှုံတိမှုံဝါး၊ စာရွက်စာသား ခပ်ညံ့ညံ့သာ ရှိခဲ့ရာမှ ၁၉၉၃-ခုနှစ် မေလထုတ် (စာစဉ်-၉၀)မှ စတင်၍ ကွန်ပျူတာစာလုံး၊ အော့ဖ်ဆက်ဖြင့် ပြောင်းလဲပုံနှိပ်ခဲ့ပါသည်။ စာရွက်စာသားမှာလည်း ယခင်ကထက် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး အနည်းငယ် ဖြူဖွေးလာခဲ့သည်။
ရှုထောင့်အသီးသီးမှ အတွေးအမြင်အသီးသီးကို ဖော်ထုတ်ရန်
အတွေးအမြင်စာစောင်၏ အမှတ်တံဆိပ်လိုဂိုအဖြစ် ကမ္ဘာကျော် ပန်းပုဆရာကြီး Rodin ၏ အတွေးရှင် The Thinker ပန်းပုရုပ်ပုံကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အတွေးအမြင်စာစောင်၏ မျက်နှာဖုံးခေါင်းစီး စာလုံးဒီဇိုင်းကို ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဘရင်ကလေးက ရေးဆွဲခဲ့သည်။
အတွေးအမြင် အမှတ်(၁) စာစောင်ကို ၁၉၈၄-ခု အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့
အတွေးအမြင် အမှတ်(၂၅) ငွေရတုစာစောင်ကို ၁၉၈၇-ခု ဇွန်လတွင် ထုတ်ဝေခဲ့
အတွေးအမြင် အမှတ်(၅၀) ရွှေရတုစာစောင်ကို ၁၉၈၉-ခု ဒီဇင်ဘာလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့
အတွေးအမြင် အမှတ်(၇၅) စိန်ရတုစာစောင်ကို ၁၉၉၂-ခု ဇန်န၀ါရီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့
အတွေးအမြင် အမှတ်(၁၀၀) ရာပြည့်စာစောင်ကို ၁၉၉၄-ခု မေလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့
အတွေးအမြင် အမှတ်(၂၀၀)ကို ၂၀၀၈-ခု နိုဝင်ဘာလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့
အတွေးချင်း အမြင်ချင်း တူတာတွေ ရှိကြမည်။ မတူတာတွေ ရှိကြမည်။ ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်အမြင်ကို ဖြောင့်မှန်စွာ တင်ပြခွင့် ရှိရပေမည်။ မတူတာတွေကို ညှိနှိုင်းပြီး အဖြေရှာဖို့ ကြိုးစားကြရပေမည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် ဗဟုဝါဒခေတ်သို့ ရောက်နေပေပြီ။ အတွေးအမြင်အသီးသီးကို အပြန်အလှန် လေးစားသမှုဖြင့် ညှိနှိုင်းအဖြေထုတ်သော တိုင်းနိုင်ငံများသည် ငြိမ်းချမ်းသာယာ တိုးတက် စည်ပင်နေကြပေပြီ…. ဟူ၍လည်း အတွေးအမြင်စာစောင်၏ မာလိန်မှူးကြီး ဆရာမောင်ဝံသက အတွေးအမြင်အုပ်တစ်ရာမြောက် စာစောင်တွင် အမှတ်တရ ရေးသားခဲ့သည်။
အတွေးအမြင် အုပ်နှစ်ရာမြောက် ဥဒါန်း
စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းသည် လူ၏တန်ဘိုးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လူ၏အရည်အသွေးလည်း ဖြစ်သည်။ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်အကြား အဓိက ကွာခြားချက်မှာ လူက စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့စဉ်လျှက် စဉ်းစားခြင်းကို အလေ့အကျင့်မလုပ်သော လူမည်ကာမတ္တများစွာ ရှိနေသေးရာ ထိုသူများအား အတွေးအမြင် အပါအ၀င် စာအုပ်စာပေများက စဉ်းစားကြပါ၊ တွေးခေါ်ကြပါ၊ ဆင်ခြင်ကြပါ ဟု အခါမလပ် နှိုးဆော်နေရပေသည်။
လူသည် မစဉ်းစားပဲနေသည့်အကျင့် ကြာမြင့်လာသောအခါ မစဉ်းစားတတ်တော့ချေ။ စဉ်းစားခြင်းသည် မိမိတို့အလုပ်မဟုတ် ဟူ၍ပင် ထင်မြင်လာတတ်ကြသည်။ အချို့ကမူ စဉ်းစားလျှင် ဦးနှောက်ခြောက်လာသည်ဟု ဆိုသည်အထိ လူ၏ အရည်အသွေးများ ပျောက်ပျက်ကုန်တော့သည်။ အတွေးအမြင်စာစောင်သည် အမှတ်(၂၀၀) ပြည့်မြောက်ခဲ့လေပြီ။ အတွေးအမြင်အနေဖြင့် ပိတ်ထားသော အသိဥာဏ်တံခါးများကို အကြိမ်(၂၀၀) ဖွင့်ခဲ့လေပြီ။
တွေးခြင်းကို အလုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ခံယူနှလုံးသွင်းလျှက် စာဖတ်ခြင်း၊ တွေးတောခြင်း၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်း အားဖြင့် စဉ်းစားဥာဏ် ရင့်သန်လိုသူများ၏ အစဉ်တစိုက် အားပေးချီးမြှောက်မှုကြောင့် အတွေးအမြင်သည်ကား အရှိန်အဟုန်မပျက် ခရီးဆက်လျှက် ရှိနေပေပြီ။
အတွေးအမြင် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ချိန်မှစ၍ စီစဉ်သူများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တွေးခြင်းကို အလုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်သည့်အကျင့်ကို အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ အတွေးအမြင်သည် အပျင်းပြေ၊ အပျော်ဖတ်စာပေများနှင့် အရောင်အသွေး၊ အမွမ်းအမံ၊ အခြယ်အသများကို နေရာမပေးပဲ စာကောင်းပေမွန်သန့်သန့်ချည်း ဖော်ပြသော စာစောင်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်သည်မှာ အတွေးအမြင်စာစောင်၏ ဦးတည်ချက်ဖြစ်သော စာကို အလေးအနက် ဖတ်၍ အတွေးနက်နက် ဖြန့်ကြက်လိုသူများအတွက် ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ထမြောက်အောင်မြင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု မိုးကုတ်မီဒီယာကလည်း ယုံကြည်သည်။
သို့သော်ငြားလည်း အတွေးအမြင်ကို လေးလေးစားစား တန်ဘိုးထားပြီး ဖတ်ရှုအားပေးသူများ ရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတွေးအမြင်ဟူသော စာစောင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်မှာ သက်တမ်းအားဖြင့် (၂၅)နှစ် တိုင်တော့မည် ဆိုသည့်တိုင် လုံးဝမသိ၊ ကြားတောင် မကြားဖူးဘူး ဆိုသူတွေများကလည်း ဒုနှင့်ဒေးပင်။
အတွေးအမြင်ဟူသော လှေကြီးသည်ကား အတွေးအခေါ်အယူအဆများစွာကို တင်ဆောင်လျှက် လှိုင်းလုံးကြီးများကြားဝယ် မလွန့်မလူး၊ မနစ်မမြုပ် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် ဆက်လက်ရွက်လွှင့်နေဆဲ…
အတွေးအမြင်သည်ကား အုပ်(၂၀၀)မြောက်ခဲ့လေပြီ။ အတွေးအမြင်၏ တံခါးမှူးကြီးများက အသိဥာဏ်တံခါး အကြိမ်(၂၀၀) ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီ။ သက်တမ်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်း (၂၅)နှစ်နီးပါး တိုင်ခဲ့ပေပြီ။ အတွေးအမြင်၏ ဖွားဖက်တော် ကလေးငယ်တစ်ယောက်သည်ပင်လျှင် ယခုအချိန်တွင် သမ္မတ လုပ်နိုင်လောက်သည့် အရွယ်ပင် ရောက်နေရော့ပြီ။ ယခုလို ထူးခြားသော အခါသမယ၀ယ် အတွေးအမြင်ကို ရှင်သန်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့ကြသည့် ဥယျာဉ်မှူးကြီးများ၊ အတွေးအမြင်ကို လှိုင်းထန်လေဒဏ် အကြား မလွန့်မလူး မနစ်မမြှုပ်ရလေအောင် ပဲ့ကိုင်မောင်းနှင်ခဲ့ကြသော မာလိန်မှူးကြီးများ၊ အတွေးအမြင်၏ မူဝါဒများ၊ ရည်ရွယ်ချက်များကို မတိမ်းမစောင်း မယိမ်းမယိုင်ရလေအောင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြသော ဗိသုကာကြီးများအား မိုးကုတ်မြို့မှနေ၍ သဟာယစာပေဆုကို ဂုဏ်ယူအပ်နှင်း ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည် ဖြစ်သည့်အတွက် မိုးကုတ်မီဒီယာကလည်း ဤနေရာမှနေ၍ မုဒိတာစကားကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် မြွက်ကြား ဖော်ပြအပ်လေသတည်း။
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 9:45 AM 1 comments